Karaiba · Septambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Karaiba · Septambra, 2017
Febroary 2017 8 Lahatsoratra
Oktobra 2016 11 Lahatsoratra
Janoary 2008 14 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Karaiba tamin'ny Septambra, 2017
Trinite Sy Tobago: Mibilaogy Zavakanto
Trinite sy Tobago27 Septambra 2017
Raha miroborobo ny tontolon'ny bilaogy miteny Anglisy Karaibeana dia mitombo tahaka izany ihany koa ny isan'ireo bilaogy miresaka lohahevitra manokana. Tato anatin'ny roapolo taona izao, Trinite no toerana lehibe ho an'ny zavakanto maoderina ao Karaiba, izay mifaninana amin'ireo ivontoerana malaza kokoa any Kiobà sy Jamaika...
Trinite Sy Tobago: Voleo Indray Ny Tany
Trinite sy Tobago26 Septambra 2017
Mpandray anjara mavitrika sy mafana fo tao amin'ny hetsi-panoherana manohitra ny fanorenana ny orinasa fandrendrehana viraty ao amin'ny vondrom-piarahamonina iray any atsimon'i Trinidad i Attillah Springer. Indro, avy ao amin'ny pejiny Flickr , ny sary iray nalaina nandritra ny fanatanterahana ny fambolen-kazo iray natao tany amin'ny faritra tamin'ny volana Jona:
‘Tsy Nahasahy Nijery Isika': Ravan'ny Rivodoza Maria I Dominica
Dominika26 Septambra 2017
'Ny faharavana tanteraka no tatitra voalohany. Hatramin'izao very avokoa ny zava-drehetra azon'ny vola novidiana sy soloina. Ny faharatran'olona tamin'ny fotoana [...] nandrava tanteraka...eny, tsy takatry ny saina.'
Trinite sy Tobago23 Septambra 2017
Dominika20 Septambra 2017
Ny Tanànakely Shinoa Ao Grenada
Azia Atsinanana19 Septambra 2017
Sarin'ny fotodrafitrasa atsangana miaraka amin'ny famatsiam-bola, ny fahaiza-manao ary ny herin'ny mpiasa avy amin'ny Repoblika Entim-Bazhoakan'i Shina... ary hamantarana ihany koa ny fomban'ny Shinoa
Karaiba: Andro Fanafoanana Ny Fanandevozana
Bahamas18 Septambra 2017
"Fotoana izao hieritreretana ny làlana nizorana amin'ny maha-firenena sy amin'izay mbola tokony ho tontosaina. Mino aho fa mbola famotsorana betsaka no ilaintsika atao".
Trinite: Hanuman murti
Trinite sy Tobago18 Septambra 2017
Miorina ao Carapichaima, Trinidad, ity murti manana halavana 25 metatra ity ary maneho ilay andriamanitra Haindò Hanuman izay malaza noho izy lehibe indrindra amin'ny karazany aty ivelan'i India.
Martinika: Ny Antoko Sosialista an'i Segolene Royal sy ny Fankahalàna ny Pelaka
Frantsa17 Septambra 2017
Eny, izany tokoa no olana : ny mahafantatra raha hitàna ny teniny... Satria mampanantena zavatra maro antsika mandrakariva, kanefa tena zara raha misy mampihatra azy ireny ireo mpanao politika.
Ireo Biloagera Miteny Frantsay Miresaka Ny Oscars Sy Ny Césars
Afrika Mainty13 Septambra 2017
Tsy isalasalàna fa misy zavatra mitranga amin'izao fotoana ao Hollywood tato anatin'ny taona vitsivitsy : mitodika misimisy kokoa mankany Afrika ny mason'ireo mpamokatra.